Siilaanyo oo Cafis u fidiyay Boqor Buurmadow | KEYDMEDIA ONLINE
Siilaanyo oo Cafis u fidiyay Boqor Buurmadow
Hargeysa (Keydmedia) - Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo hogaamiyaha Maamulka la magacbaxay Soomaaliland ayaa cafis u fidiyay Boqor Cismaan Boqor Buurmadow oo dhowaan maxkamad ku taallamagaalada Hargeysa ay ku xukuntray hal sano oo xarig ah.
Boqor Buurmadow xabsiga ayaa laga sii daayay waxaana siideyntiisu ay timid kadib markii uu cafis u fidiyay hgaamiyaha Maamulka Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, oo markii ay maxkamaddu ku eedaysay in uu aflagaadeeyey.
Boqor Buurmadow oo isna warbaahinta la hadlay waxaa uu sheegay inuu aad ugu faraxsanyahay cafiska uu u fidiyay hogaamiyaha Soomaaliland, isagoona raali galin ka bixiyay dambigii loo heystay.
Maxkamada Soomaaliland ayaa xukuntay Buurmadow kadib markii uu aflagaadeeyay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo
Sikastaba Maamulka Somalilan ayaa inta badan caburin iyo xoriyad la’aan kula dhaqma waxgaradka, siyaasiyiinta, saxafiyiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi.
Keydmedia.net - Xafiiska Hargeysa